theZOMI: [aurorageneration] ရှီယိုက်မွတ်စလင်နဲ့ဆွန်နီမွတ်စလင်စစ်တမ်း
3/ မိုဟာမက် ရဲ့မြေး အရင်း ခေါက်ခေါက် ၊ Imman Ali Hyussein ကိုခေါင်းဖြတ်သတ်ခဲ့ သော မွတ်ဆလင် များ ၊ ခင်ဗျားတို့ ကို ကံကြီးထိုက် ပြီ။
မိုဟာမက် ကို အသက်ထက်ချစ်တယ် လို့ ခံယူပြီး မိုဟာမက် အရမ်းချစ်တဲ့ မိုဟာမက် ရဲ့မြေး အရင်း ခေါက်ခေါက် Imman Ali Hyussein ကို ခေါင်းဖြတ်သတ်သော ဆွန်နီမွတ်ဆလင်များ( မြန်မာပြည်က မွတ်ဆလင်အများစု) နဲ့ 
Imman Hyussein ကို ချစ်တဲ့ Imman Hyussein အတွက် တိုက်မယ်ပြော ပြီး Imman Hyussein ကို ရောင်းစားခဲ့ သော ရှီးယိုက်မွတ်ဆလင်များ။
အဲဒီမွတ်ဆလင် ၂ မျိုးဟာ ဘယ်တော့မှ ရာဇ၀င်ကြွေးကျေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
မွတ်ဟာမက်ရဲ့ မြေးအရင်းခေါက်ခေါက်ဖြစ်တဲ့ Imman Hyussein ကို ခေါင်းဖြတ် သတ်တဲ့ မွတ်ဆလင်တွေဟာ အင်မတန်မှ မိုက်မဲ လနတ်ဘုရား အလ္လာကြီး အမိန့် တော်အရကံကြီးထိုက်မဲ့ ငမိုက်သားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
မည်သည့်မွတ်ဆလင်ကို အလ္လာ ကချစ်မည်နည်း။ ဝေးစွ…
မွတ်ဆလင်တွေဟာ မိုဟာမက်ရဲ့ သွေးရင်းသားရင်း မိသားစု ၀င်တွေကို သတ်ပစ်တာကိုတွေ့ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
မိုဟာမက်ရဲ့ သွေးရင်းသားရင် ဆက်ခံသူ မိသားစုဝင်တွေ အားလုံး
နောက်ဆုံးမိသားစု အထိသတ်ပစ်တာ တခြားဘာသာတွေမဟုတ်ပါဘူး။
မိုဟာမက်ကိုချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေကိုယ် တိုင် ပါပဲ။
မိုဟာမက်ရဲ့ Generation Bloodline ကို မျိုးတုန်းသတ်ပစ်ခဲ့တဲ့မွတ်ဆလင်တွေပါ။
မိုဟာမက်သာ အဲဒီ အဖြစ်ကို တွေ့ ခဲ့ရင် အာလာဘုံမှာ လူပျိုပေါက် ၂၈ယောက်နဲ့ Fucking ပေးနေရာကနေ ချုံးပွဲချ ငိုကြေးမိမှာ ပဲ။
သူကိုတို င်ချီချီပိုးမွေးမြူချစ်ခဲ့ တဲ့ သူ့ရဲ့ မြေးအရင်းခေါက်ခါက် ဖြစ်တဲ့ အလီဟူစိန်ကို မွတ်ဆလင်တွေက ခေါင်းဖြတ်သတ်ရုံတင် မကဘူး၊ လသားအရွယ်ကလေးသာရှိသေးတဲ့
အလီဟူစိန်ရဲ့သား ကလေး ၊ မိုဟာမက်ရဲ့ မြစ်၊ နောက်ဆုံးသောမျိုးဆက် ကို ပါ သတ်ပစ်တဲ့ မွတ်ဆလင်တွေပါ။
မွတ်ဆလင်တွေဟာ Rampage ဖြစ်ကုန်ပါပြီ။ သွေးတွေစွန်း။ သွေးတွေစာပြီး ကိုရမ်ကျမ်းစာကိုကိုင်ပြီး ရက်ရက်စက်စက် သတ်ကုန်ပါပြီ။
ဆွန်နီဗလီ မှာရှီးယိုက်တွေက ဗုံးခွဲပြီး မှားယွင်းနေတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေကို သတ်လိုက်ပြီလို့ ကွေးကြော်နေပါပြီ။
ရှီးယိုက် ဗလီ မှာဆွန်န်နီတွက ဗုံးခွဲပြီး မှားယွင်းနေတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေကို သတ်လိုက်ပြီလို့ ကွေးကြော်နေပါပြီ။
မွတ်ဆလင်ဘာသာ ဟာ မကောင်းဆိုးဝါးက ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်လို့ အင်မတန်မှ သွေးဆာပါတယ်။ သတ်ပြီးရင်းသတ်ချင် အောင် ကိုရမ်က လှုံ့ ဆော်ပေးပါတယ်။
အင်မတန်မှ ထိတ်လန့် စရာ Evil book ကိုရမ် Qu'ran ဖြစ်ပါတယ်။ မွတ်ဆလင် အချင်းချင်းတောင် မျက်စိထဲ မထည့်တော့ပါဘူး။ ရှီးယိုက်မွတ်ဆလင်တွေပဲ ၊ သတ်ကွာ။
ဒီကောင်တွေ ဆွန်နီ မွတ်ဆလင်တွေ ပဲ ၊ အရှင်မထားနဲ့ ကွာ။ နောက်ဆုံး မိုဟာမက်ကြီးရဲ့
မိသားစုဝင်တွေ အားလုံး ၊ နောက်ဆုံးမျိုးဆက် အထိ မျိုးတုန်းအောင် မွတ်ဆလင်တွေ သွေးပွက်ပွက်ဆူပြီးသတ်ခဲ့ကြတာပါ။
ခင်ဗျားတို့ ဘယ်လောက် သတ်သတ် ငရဲကျဖို့ ၉၉% ပါပဲ။ အလ္လာဘုံမှာ Fucking ပေးရဖို့ က ၁% ပဲရှိတယ်။ မိုဟာမက်ကြီးကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တာနော်။
ဒါက ဗုဒ္ဓဘာသာကို စော်ကားတဲ့ blog ကို ဖတ်မိတဲ့သူတွေ အတွက်ပါ။
အဲဒီ page မှာ အဓိက ကြည့်စေချင်တာကတော့ မွတ်ဆလင်တွေရဲ့ စောက်ကျင့်ပါပဲ။ မွတ် ဆလင်ဆိုမွတ်ဆလင်ပေါ့ ။ ပေါ်တင်မပြောရဲဘူး။
နောက်တစ်ခုသိစေချင်တာ က မွတ်ဆလင် တွေအင်အားများ လာတဲ့အခါ ဘယ်လောက် လူပါးဝ လာသလဲဆိုတာတွေ့ တယ်မဟုတ်လား။
ဗုဒ္ဓဘာသာကို မြန်မာစာ မြန်မာစကားနဲ့ စော်ကား ပြီးရေးတာ ဘယ်လောက်ခံရခက်လဲ တွေ့ ပြီလား။
မြန်မာ ပြည် က မွတ်ဆလင် အများစုရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အပေါ်သဘောထား က အဲဒါပဲ။ ဒါစာတွေ့ ပဲရှိသေးတယ်နော်။ လက်တွေ့ ဖြစ်ပြီဟေ့ဆိုရင် သိတယ်မဟုတ်လား။ အင်ဒိုနီးရှား၊ တူရကီဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ သိတယ်မဟုတ်လား။
ဒါက နိုင်ငံတိုင်းမှာ ဖြစ်နေတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေ လူပါးဝတဲ့ အကြောင်းပဲ၊
ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာနေတယ်၊ ပြင်သစ် စကားနဲ့ ပြင်သစ်လူမျိုးတွေ အဓိက ထားတဲ့ ခရစ်ယာန်ဘာသာကို ပြင်သစ်စကားနဲ့ စော်ကားမယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတယ်၊ ထိုင်း စကားနဲ့ထိုင်းလူမျိုးတွေ အဓိက ထားတဲ့ ဗုဒ္ဓ ဘာသာကို ထိုင်း စကားနဲ့ စော်ကားမယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာနေတယ်။ မြန်မာစကား၊ မြန်မာစာနဲ့မြန်မာ လူမျိုးတွေ အဓိက ထားတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာကို မြန်မာ စကားနဲ့ စော်ကားမယ်။
အဲဒီကောင်တွေနဲ့ ကလေးတောင် Debate လုပ်လို့ ရတယ်။
ယေရှုခရစ်၊ မိုဟာမက်၊ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသုံးယောက်ကို ယှဉ်ကြည့်လိုက်။
ယေရှုခရစ်၊ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာလုပ်ခဲ့တဲ့ အရာတွေနဲ့ မိုဟာမက်ရဲ့ စောက်ကျင့်စောက်ကြံတွေကို နိုင်းယှဉ်လိုက် ၊ ပွဲပြတ်နေပြီ။
ဘာ ဘုန်းကြီး၊ စေတီ၊ ဘာ ဗလီ၊ ဗလီဆရာ၊ ဘာ ဘုရားကျောင်း ၊ ခရစ်ယာန်ဘုန်းကြီးမှ ဆွဲမထည့်နဲ့ ။ ကာယကံရှင် ၃ ယောက်ကို ပဲ ယှဉ်ကြည့် လိုက်..ပွဲပြီးပြီ။
ယေရှုခရစ်၊ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟာ ဂနှစ် သမီး ကို မုဒိန်း ကျင့် ခဲ့လား။ ? လုပ်ခဲ့ရင်ပြော၊ မိုဟာမက် ဟာ သေခါနီကြီး ၅၄ နှစ် အရွယ်မှာ သူ့ မြေးလောက်ရှိတဲ့ဂနှစ်အရွယ်ကလေးလေးကို ချွေးသံတရွဲရွဲ နဲ့ တက် မုဒိန်းကျင့်လိုးခဲ့တယ်။
ယေရှုခရစ်ဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ လည်ပင်းကို လှီးသတ်ခဲ့ ဖူးလား။ လုပ်ခဲ့ရင်ပြော၊ ယေရှုခရစ်ဟာ ထာဝရဘုရားဆီက ကြွလာတယ်ပြောပြီး ညဘက်ကျရင် မိုဟာမက်လိုမတရားမုဒိန်းကျင့် သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ မိန်းကလေးတွေကို သွားသွားလိုးနေလား။ လုပ်ခဲ့ရင်ပြော၊ မလုပ်ခဲ့ရင် မပြောနဲ့ ။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ လည်ပင်းကို လှီးသတ်ခဲ့ ပြဖူးလား။ လုပ်ခဲ့ရင်ပြော၊ မလုပ်ခဲ့ရင် မပြောနဲ့ ။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟာ ဘုရားဖြစ်သွား ပြီးနောက် လူတွေကို ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းအောင် ဆုံးမပြီး သူကိုယ်တိုင်ကျတော့ညဘက်ကျရင် မိုဟာမက်လို မတရားမုဒိန်းကျင့် သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ မိန်းကလေးတွေကို သွားသွား လိုးနေလား။လုပ်ခဲ့ရင်ပြော၊ မလုပ်ခဲ့ရင် မပြောနဲ့ ။
ဒီတော့ ဘာကို Debate လုပ်မှာ လဲ ။ မွတ်ဆလင်တွေက ဘာကိ်ု Debate လုပ်ချင်နေတာလဲ။ရှင်းနေပြီလေ။ ဘယ်သူက ဘယ်လို အတန်းအစားလဲဆိုတာ။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ နဲ့ ယေရှုခရစ် ဟာလူတွေရဲ့ ကောင်းတဲ့အခြမ်းကို Bright Side များလာအောင် ယဉ်ကျေးမှု တွေးခေါ်မှု ကိုယ်ကျင့်တရား ကောင်းလာအောင် ဆုံးမခဲ့တာဆိုရင် မိုဟာမက်ဟာလူတွေရဲ့ Dark side မကောင်းတဲ့ အပိုင်းကို အစွမ်းကုန်မိုက်ရိုင်း ခွင့်ပေးထားပြီးလူတွေကို ယဉ်ကျေးမှုမြင့်တဲ့အဆင့်ကနေ အောက်တန်းဇား လူသတ်မုဒိန်းကျင့် ဘ၀ရောက်အောင် အသိဥာဏ်မဲ့ လူရိုင်းဘ၀ ဖြစ်အောင် လုပ်ခဲ့တဲ့ မကောင်းဆိုးဝါး တမန်တော် ပဲ။
Buddha နဲ့ Jesus ဟာလူတွေ ကို အလင်းပြခဲ့တာဆိုရင် မိုဟာမက် ဟာ လူတွေကို အမှောင်ထဲ ကို ဆွဲချခဲ့တဲ့ မကောင်းဆိုးဝါး အလ္လာရဲ့ တမန်တော်ဖြစ်ပါတယ်။
Aurorageneration အတွက် facebook link ပါ။
Aurorageneration facebook page
https://www.facebook.com/Aurorageneration (Still fixing)
သင်သည် aurorageneration group ဧ။် member တစ်ယောက်ဖြစ်သောကြောင့် ယခု mail ရရှိခြင်းဖြစ်သည်။group ဧ။်အသေးစိတ်ကိုhttp://groups.google.com/group/aurorageneration/topics?start=10&sa=N မှာကြည့်နိုင်ပါသည်။ သင်ဧ။် mail များကိုဖြန့်ဝေချင်ပါကaurorageneration@googlegroups.comသို့ပို့နိုင်ပါသည်။ group ကိုဝင်ချင်ပါက aurorageneration+subscribe@googlegroups.com သို့ mail ပို့ ခြင်းဖြင့် ၀င်နိုင်ပါတယ်။ group မှထွက်ချင်ပါက aurorageneration+unsubscribe@googlegroups.com ဖြင့်ထွက်နိုင်ပါတယ်။
group နှင့်ပတ်သက်ပြီး အကြံဥာဏ်များပေးလိုပါက aurorageneration+owner@googlegroups.com သို့ မေးလ်ပို့နိုင်ပါသည်။
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Newgeneration" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to aurorageneration+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to aurorageneration@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/aurorageneration?hl=en.